Teknolojiyada Goynta-Edge - CESE2 (Thailand) CO., LTD
Xarunta Teknolojiyada BIM waxay leedahay khibrad hodan ah oo ku saabsan dhismaha qaabka BIM, qaabeynta sawirada dhismaha iyadoo la adeegsanayo barnaamijka BIM, ogaanshaha isku dhaca dhuumaha iyo caawinta rakibaadda iyo dhismaha goobta, waxay sidoo kale adeegsaneysaa tikniyoolajiyadda BIM hirgelinta iyo maaraynta mashaariicda ballaaran. , sida maaraynta qalabka kaabayaasha ah, saadaalinta qiimaha, jilitaanka dhismaha iyo go'aaminta qorshayaasha, qaybo horay loo sii diyaariyay, oo si weyn u hagaajinaya tayada mashruuca.
Kordhinta tiknoolajiyada jilitaanka kumbuyuutarka, jilitaanka qaybinta hawada ee qolka nadiifka ah ayaa u soo baxday inay tahay tikniyoolajiyad goos goos ah xagga dhismaha injineernimada. Kooxda farsamada ee CFD waxay kudayasho u sameysay analoogga noocyada kala duwan ee hawada loo qaybiyo, heerkulka iyo qoyaanka jawiga ma guurtada ah iyo kan firfircoon ee nadiifka ah ee gudaha iyadoo la qaatay barnaamijka CFD, waxayna sameysay xoogaa horumar ah, iyadoo taageero farsamo siineysa suuq geynta iyo qaabeynta HVAC
Xaqiijinta GMP waa xiriir muhiim u ah warshadda dawooyinka si loo helo rukhsadda hawlgalka ka dib dhammaystirka mashaariicda. Maaddaama la soo saaray nooc cusub oo ah heerarka tayada GMP iyo GSP, Shiinaha ayaa xoojiyay nidaamkiisa iyo maareynta daroogada, wayna ku adag tahay warshadaha dawooyinka inay maraan xaqiijinta GMP. Si adeegyo wanaagsan loo siiyo warshadaha dawooyinka, shirkaddu waxay aasaastay xarunta xaqiijinta GMP si ay u siiso adeegyo xaqiijin ah warshadaha dawooyinka, kana caawiso iyaga inay mashruuc ka gudbiyaan xaqiijinta GMP si habsami leh.